Hadda waxaad qandaraas ku qaadan kartaa multiSIM ee Apple Watch-kaaga oo leh O2 | Wararka IPhone
Hadda waxaad qandaraas ku qaadan kartaa multiSIM ee Apple Watch-kaaga oo leh O2
Toni Cortés | | dhowr
Laga bilaabo maanta, waad qandaraas siin kartaa adeegga multiSIM, sida Movistar u haysto, iyada oo ay la socdaan hawlwadeenkeeda labaad, O2 Spain. Sidaan ku dhawaaqnay in yar maalmo, O2 ayaa hada dhaqaajisay barnaamijkeeda Apple Watch ee ku habboon eSIM. Haddii aad tahay macmiil ka shaqeeya wadaha, hadda waxaad ku hawlgelin kartaa Apple Watch-kaaga nidaamka multiSIM. Hadda waxaad uga tagi kartaa iPhone-kaaga guriga oo aad ku xirnaan kartaa shabakadda 4G ee leh saacaddaada.
Dhowr sano ka hor, Apple waxay soo saartay taxanaheeda Apple Watch 3 oo leh sheeko cusub. Waxaad horeyba u kala dooran laheyd qaabka GPS-ka caadiga ah iyo midka LTE ee isku xirka 4G, sida ku dhacda ipadyada. Noocani cusub ee saacadda Apple wuxuu xiriir toos ah la leeyahay shabakadda taleefanka ee 4G, sidaa darteed waxaad hadda si badbaado leh ugu hilmaami kartaa iPhone-kaaga guriga, waxaad sii wadi doontaa inaad lahaato xiriir cod iyo xog ah oo ku saabsan Apple Watch-kaaga.
Cabirka yar ee qalabka awgiis, ma jirto meel lagu xareeyo kaar jireed oo jireed, marka waa inaad miciinsataa mid meherad ah, eSIM wicitaano. Si loo daboolo qalabkan, shirkadaha taleefanadu waxay leeyihiin nidaamka MultiSIM. Nidaamkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad haysato ilaa 4 kaar oo SIM ah oo la xiriira isla lambarka taleefanka. SIM-yadaas isku xiran waxay noqon karaan muuqaal, ama muuqaal (eSIM).
Haddii shirkadda taleefankaagu ay tahay O2, oo Apple Watch-kuagu leeyahay 4G LTE isku xirnaanta, Hadda waad qandaraas siin kartaa nidaamka MultiSIM, oo leh kharash dheeraad ah € 5 bishiiba. Waa isku qiimo shirkadaha kale ee bixiya adeegan adiga, Vodafone iyo Orange, oo iyagu ahaa kuwii ugu horeeyay ee hirgaliyay, Movistar, oo biloowday bilo yar kadib, hadana ah shirkadiisa, O2. Noocyada kale ee taleefannada gacanta sida Pepephone ama Yoigo waxay horeyba u leeyihiin eSIM, laakiin weli lama jaan qaadayaan Apple Watch.
Ma aha inaad wacdo shirkadda si aad u kiciso adeegga. Waad ka dhaqaajin kartaa barnaamijka O2 ee loogu talagalay iOS, daqiiqado yar gudahood, waxaad kuheli doontaa 4G daboolidaada Apple Watch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Hadda waxaad qandaraas ku qaadan kartaa multiSIM ee Apple Watch-kaaga oo leh O2
Oran leh sicirrada qaar ayaan wax lacag ah ka bixinaynin, Vodafone iyo Movistar had iyo jeer waa lacag.
Taasi waa sax, laakiin sicirka Orange ee ku bixiya bilaash ayaa ka qaalisan O2's.
Robert David dijo
Hadda waa badeecad kala geddisan, markii qof kastaa haysto, waxaa suuragal ah inuu hoos u dhac ku yimaado ama lagu daro heerka. Waxaan rajeynayaa sidaas, maxaa yeelay feker ahaanteyda adeeggu waa qaali.
Ku jawaab Roberto David
In kasta oo AppleTV + iyo Disney +, hadana Netflix wuu sii ahaan doonaa King
Mario Kart Tour wuxuu noqdaa kii ugu weynaa ee Nintendo ku dhaca mobilka